ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ပြန်လျှောက်နည်း ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ရတယ် - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ပြန်လျှောက်နည်း ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ရတယ်
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 2:33 AM Knowledge and FAQ, နည်းလမ်းများ
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒီလိုပြန်လျှောက်
သင်ကိုင်ထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင် ဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့ ဒီလိုလေးပြန်လျှောက် ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ပြန်ရတယ်။ မှတ်ပုံတင်မူးရင်ရယ် မိတ္ထူရယ် ယာဉ်ထိန်းထောက်ခံစာရယ်ပဲလိုတာ အဲ့ဒီသုံးမျိုးစုံရင် ကညနမှာပြန်လျှောက် ပြန်ရရော။
အဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ယာဉ်ထိန်းထောက်ခံစာဟာ မိမိရဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် နံပါတ်ပြောပြနိုင်မှ ထောက်ခံစာရေးလို့ ရမှာမို့ မိမိပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရဲ့ နံပါတ်တော့ မှတ်မိရမယ်နော်။ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ ကူးခဲ့ဖူးတဲ့ မိတ္ထူတွေရှိရင် အဲ့ထဲမှာပြန်ကြည့်ပေါ့။
မဟုတ်ဘူး ဘယ်လိုမှကိုမမှတ်မိတော့ဘူး ပြန်ကြည့်စရာလဲ ဘာမှမရှိဘူး ဆိုခဲ့ရင်ဖြင့်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့ ဒီလိုလေးလုပ်။
မှတ်ပုံတင်ယူသွားပြီး ကညနမှာ ကျွန်တော့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လေး ပျောက်သွားတာ ပြန်လျှောက်ချင်လို့ နံပါတ်မမှတ်မိတော့လို့ နံပါတ်လေး သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ လို့ပြောပြီး အကူအညီတောင်း ရှာပေးပါတယ် နံပါတ်ရလာပါလ်ိမ့်မယ်။
ကဲ ဘာအခက်အခဲရှိသေးလဲ အားလုံး OK နော်။ အော် ကုန်ကျစရိတ်လား ပြောပြပေးပါ့မယ်။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အလိုက် ပျောက်ဆုံးသွားလို့ ပြန်လျှောက်တဲ့အခါ ဒီလောက်ကုန်ပါတယ်.
“သ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၃၀၀၀
“က-၁” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၅၀၀၀
“က” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၈၀၀၀
“ခ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၃၀၀၀၀
“ဂ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၃၀၀၀၀
“ဃ” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၃၀၀၀၀
“င” ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၅၀၀၀၀
“ဌ” “ဟ”ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ၁၀၀၀၀
“စ” စပယ်ယာလိုင်စင် ၅၀၀၀
သက်တမ်းလွန်တာတွေ ဘာတွေညာတွေဆိုရင်တော့ သက်တမ်းလွန်ကြေးက သက်သက်ပါနော်။
Unicodeဖွငျ့ဖတျရနျ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ပြောကျသှားခဲ့ရငျ ဒီလိုပွနျလြှောကျ
သငျကိုငျထားတဲ့ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ပြောကျဆုံးသှားတယျဆိုရငျ ဘာမှစိတျပူမနနေဲ့ ဒီလိုလေးပွနျလြှောကျ ဒီနလြေှ့ောကျ ဒီနပွေ့နျရတယျ။ မှတျပုံတငျမူးရငျရယျ မိတ်ထူရယျ ယာဉျထိနျးထောကျခံစာရယျပဲလိုတာ အဲ့ဒီသုံးမြိုးစုံရငျ ကညနမှာပွနျလြှောကျ ပွနျရရော။
အဲ့ တဈခုတော့ရှိတယျ ယာဉျထိနျးထောကျခံစာဟာ မိမိရဲ့ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ နံပါတျပွောပွနိုငျမှ ထောကျခံစာရေးလို့ ရမှာမို့ မိမိပြောကျဆုံးသှားတဲ့ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျရဲ့ နံပါတျတော့ မှတျမိရမယျနျော။ ရိုကျထားတဲ့ပုံတှေ ကူးခဲ့ဖူးတဲ့ မိတ်ထူတှရှေိရငျ အဲ့ထဲမှာပွနျကွညျ့ပေါ့။
မဟုတျဘူး ဘယျလိုမှကိုမမှတျမိတော့ဘူး ပွနျကွညျ့စရာလဲ ဘာမှမရှိဘူး ဆိုခဲ့ရငျဖွငျ့လညျး စိတျမပူပါနဲ့ ဒီလိုလေးလုပျ။
မှတျပုံတငျယူသှားပွီး ကညနမှာ ကြှနျတေျာ့ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျလေး ပြောကျသှားတာ ပွနျလြှောကျခငျြလို့ နံပါတျမမှတျမိတော့လို့ နံပါတျလေး သိခငျြလို့ပါခငျဗြာ လို့ပွောပွီး အကူအညီတောငျး ရှာပေးပါတယျ နံပါတျရလာပါလိမျ့မယျ။
ကဲ ဘာအခကျအခဲရှိသေးလဲ အားလုံး OK နျော။ အျော ကုနျကစြရိတျလား ပွောပွပေးပါ့မယျ။ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ အလိုကျ ပြောကျဆုံးသှားလို့ ပွနျလြှောကျတဲ့အခါ ဒီလောကျကုနျပါတယျ.
“သ” ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ၃၀၀၀
“က-၁” ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ၅၀၀၀
“က” ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ၈၀၀၀
“ခ” ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ၃၀၀၀၀
“ဂ” ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ၃၀၀၀၀
“ဃ” ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ၃၀၀၀၀
“င” ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ၅၀၀၀၀
“ဌ” “ဟ”ယာဉျမောငျးလိုငျစငျ ၁၀၀၀၀
“စ” စပယျယာလိုငျစငျ ၅၀၀၀
သကျတမျးလှနျတာတှေ ဘာတှညောတှဆေိုရငျတော့ သကျတမျးလှနျကွေးက သကျသကျပါနျော။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ပြန်လျှောက်နည်း ဒီနေ့လျှောက် ဒီနေ့ရတယ် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 2:33 AM Rating:5Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်သွားခဲ့ရင် ဒီလိုပြန်လျှောက် သင်ကိုင်ထားတဲ့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင် ဘာမှစ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 2:33 AM